Tarisa zvakanyanya Windows 11's nyowani Outlook email app ine Mica dhizaini uye nezvimwe
Dai 29, 2022 by bartez64
Microsoft yakabudirira kugadzirisa nyaya dzewebhu browser pa Windows nekutama EdgeHTML-based Edge kune iyo Chromium injini. Iyo kambani yave kushandisa zano rakafanana reOutlook app uye yatanga kuburitsa iyo itsva email mutengi kune vese. Windows 11 uye Windows 10 kuburikidza neHofisi Insider chiteshi. Kune vasingazive, Windows parizvino inotsigira maviri desktop email vatengi… [Verenga zvakawanda ...] nezve Kunyatso tarisa Windows 11's nyowani Outlook email app ine Mica dhizaini uye nezvimwe
Google Tsvaga yakasviba modhi iri kupedzisira yabuda kune wese munhu
Mamodhi erima anga achiparadzira nzira yavo yeinky mumapurogiramu, mawebhusaiti uye masisitimu anoshanda kwemakore akati wandei. Kufanana nemakambani mazhinji, Google haisati yaziva kune yakasviba modhi, uye iko zvino kutaridzika kune mumvuri kuri kubuda kune vashandisi vedesktop vhezheni yayo yemureza Kutsvaga sevhisi. Isu tine tarisiro yeGoogle Search yakasviba modhi pakutanga kwegore rino, uye ikozvino sarudzo ndeye ... [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle Tsvaga yakasviba modhi iri kupedzisira yabuda kune wese munhu
Microsoft Teams ichakurumidza kutsigira Dynamic e911 yeKushanda kubva kune vashandisi veKumba
Dynamic e911 inopa kugona kuona zvine simba nzvimbo yemushandisi weTimu yekufona kwekukurumidzira. Nhasi, e911 inowanikwa kune vashandisi mune admin yakagadziriswa nzvimbo pamabhizinesi network chete. Microsoft zvakadaro yakazivisa chinhu chitsva chinozowedzera kugona kune vashandisi vanoshanda kure kubva kune dzimwe nzvimbo dzine simba. Nevashandisi vakawanda veTimu vari kushanda… [Verenga zvakawanda ...] nezve Matimu eMicrosoft achakurumidza kutsigira Dynamic e911 yeKushanda kubva kune vashandisi veKumba
TEAMGROUP inoburitsa T-FORCE CARDEA A440 Pro Special 5eries M.2 SSD ye PlayStation 5
Iyo Sony PlayStation 5 iri nani pane Xbox Series X? Zvamazvirokwazvo. Iyo ine yakasarudzika mitambo iri nani, yakawedzera futuristic dhizaini, uye kutaura chokwadi, zita riri nani zvakare. Ndinoreva, Series X? Microsoft yatanga kuseka hurongwa hwayo hwekupa mazita nguva pfupi yadarika. Nekuda kweiyo nyowani firmware yekuvandudza (ikozvino iri mubeta) iwe unogona pakupedzisira kuwedzera iyo PlayStation 5 yekuchengetedza yemukati zvakare, ... [Verenga zvakawanda ...] nezve TEAMGROUP kuburitsa T-FORCE CARDEA A440 Pro Special 5eries M.2 SSD ye PlayStation 5
Tweaking chishandiso ThisIsWin11 ndiyo 'iyo chaiyo PowerToys ye Windows 11 '
Windows 11 inogona kunge isina kuburitswa kwakakodzera parizvino, asi pane atove maturusi nemaapplication anowanikwa kune yazvino vhezheni yesisitimu inoshanda. Isu tatoona Start11 yekutora iyo yekutanga menyu, uye ikozvino tave neiyiIsWin11 yekugadzirisa, kugadzirisa uye kubvunzurudza Windows 11. Iyi yemahara app inoita kuti zvive nyore kubvisa zvisingadiwe zvikamu kubva Windows 11 kubatsira kugadzira zvimwe… [Verenga zvakawanda ...] nezveTweaking chishandiso ThisIsWin11 ndiyo 'iyo chaiyo PowerToys ye Windows 11 '
Gadzira Malwarebyte akakwira CPU uye Yekushandisa kushandiswa pa Windows 11 / 10
Kana Malwarebytes ari kukonzera yakakwira CPU neMemory yekushandisa nyaya pa Windows 11/10, tevera aya matipi ekugadzirisa matambudziko uye matekiniki ekugadzirisa. Panogona kunge paine zvikonzero zvakasiyana nei Malwarebytes iri mumamiriro asina kujairika. Nekudaro, hezvino zvimwe zvezvinokonzeresa uye zvinoenderana nemhinduro dzaunogona kuita pakombuta yako. Gadzirisa Malwarebytes yakakwira CPU uye Memory kushandiswa Kugadzirisa ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Fix Malwarebytes yakakwira CPU nekushandisa kweMemory pa Windows 11 / 10
Ko Global Chip Kuperevedza kuchakanganisa Kuburitswa kwe Windows 11?
Windows 11 yakatotarisana nekukakavadzana nekuda kwechimiro chekuburitswa kwayo. Ko Global Chip Shortage ichaikanganisa zvakanyanya here? Kana wakamboedza kutenga chero mudziyo wemagetsi mukati megore rapfuura, unofanira kunge wakazvifunga, “Ndinopika kuti ndakaona izvi zviripo nemutengo wakaderera mazuva mashoma apfuura”. Pamwe wakatomboedza kuodha PS5 kana Xbox Series X uye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Ko iyo Global Chip Kushomeka kuchakanganisa Kuburitswa kwe Windows 11?
Microsoft inofanirwa kuwedzera rutsigiro rwemuno rwe haptic trackpads mu Windows 11
Kufanana neayo Precision mutyairi chirongwa Microsoft inoda kuvaka yekumanikidza kuona kwe haptic trackpads mu Windows 11 kunyatsojekesa chiitiko. Pakutanga svondo rino, ini ndakatsanangura hurongwa hwehaptic trackpads inouya Windows malaptop muna 2022. Nemubatanidzwa weBoréas neCirque naSensel vachibuda neinotevera-gen trackpads yemakomputa akajairika, tinofanirwa kuona… [Verenga zvakawanda ...] nezveMicrosoft inofanirwa kuwedzera rutsigiro rwemuno rwehaptic trackpads mu Windows 11
Maitiro Ekuwedzera kana Kubvisa Zvinhu mune Zvese zvinoshandiswa paKutanga Menyu mu Windows 10
Iyo yekutanga menyu inoramba ichichinja pamwe nekuburitswa kweyakavaka nyowani kana maficha ekuvandudza eiyo Windows 11/10 OS. Vashandisi vePC vane kugona kushandura iyo Start menyu kune zvavanofarira, sekuwedzera dhairekita kuKutanga menyu uye nezvimwe. Mune ino posvo, isu tinokuratidza maitiro ekuwedzera kana kubvisa Zvinhu muZvose zvishandiso muKutanga Menyu pa Windows. Ndinobvisa sei mapurogiramu kubva kuStart menu? Ku… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro Ekuwedzera kana Bvisa Zvinhu mune Zvese zvinoshandiswa paKutanga Menyu mu Windows 10
Microsoft's Universal Print ikozvino inotsigirwa muOneDrive pawebhu
Kudzoka muna 2020, Microsoft yakatanga kuzivisa Universal Print, gore-yakavakirwa kudhinda sevhisi inogonesa yakapusa, yakapfuma uye yakachengeteka yekudhinda ruzivo rwevashandisi uye kubatsira kuderedza nguva uye kushanda nesimba kweIT. Nhasi, Microsoft yakazivisa rutsigiro rweUniversal Print muOneDrive. Neiyi itsva Universal Print yekubatanidza muOneDrive pawebhu, vashandisi vanogona kudhinda zvinyorwa zvakachengetwa muOneDrive ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Microsoft's Universal Print ikozvino inotsigirwa muOneDrive pawebhu
Maoko mberi Windows 11 chiitiko chitsva cheKubvuta Chishandiso
Alongside Windows Calculator uye Mail & Calendar app, Microsoft yatanga kuburitsa iyo nyowani Yekushandisa Turu kune vanoedza mu Windows Chirongwa chemukati (Dev Channel). Ichi chishandiso chinosanganisa yakanakisa yekirasi Snipping Tool uye Snip & Sketch, uye inongodaidzwa kuti "Snipping Tool". Iyo app yakagadziridzwa neWinUI zvinodzora kuti ienderane nechitarisiko uye kunzwa kwe Windows ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Maoko kuenderera Windows 11 chiitiko chitsva cheKubvuta Chishandiso
ICloud ye Windows Pakupedzisira Ngatibvumirei Iwe Kugadzirisa EpaPassword
Kana paine chimwe chinhu chero munhu anoshandisa Windows PC uye iPhone iri kutsvaga, iko kugona kubata mapassword avo muICloud ye Windows. Huye, vhezheni 12.5 yeICloud pakupedzisira inowedzera yakakodzera password maneja, ichigadzira yakatowanda uye inoshanda app. ICloud Itsva Windows Password Manager Pane zvakawanda zvakanaka muchinjikwa-chikuva password mamaneja kunze uko ku… [Verenga zvakawanda ...] nezve ICloud ye Windows Pakupedzisira Ngatibvumirei Iwe Kugadzirisa EpaPassword